Ukushaja okungenantambo: Nekusasa
Ukushaja okungenantambo Sekuyisikhathi eside Nokho kwadingeka amagajethi mahhala kunoma yikuphi imfuhlumfuhlu, futhi namuhla akuyona isixazululo evame kakhulu, futhi amaningi kumadivayisi eselula namanje ngeke akwenze ngaphandle lingatshajwa kusukela amapayipi. Ngakho-ke yini isizathu ukwenqena abakhiqizi ukushintshela ekukhiqizweni imikhiqizo esibaluleke ngaleyo ndlela?
Kudivayisi-lucky nge engenantambo ukushaja ubuchwepheshe
Possibility Ukushaja ibhethri ngaphandle kwezintambo namuhla ngokuyinhloko iwuhlelo amamodeli we izizukulwane ezahlukene. Phakathi kwabo, i-Nexus tablet 7, i-Nexus 4 kanye 5, LG G2, Droid Maxx kusukela Motorola, onobuhle Lumia 920 futhi 1020 kusukela Nokia, kanye samsungovsky Galaxy S4 - lokhu imodeli ngumkhiqizi ozikhethela Ukushaja okungenantambo, intengo imayelana $ 90 . Yiqiniso, inani amagajethi-lucky ezifana usuku okwandisa emini, kodwa zonke basonta ekilasini premium futhi kungaba ukukhokhela hhayi umthengi ngamunye. Futhi isihloko "Udla" ibhethri ngaphandle kwezintambo izithakazelo nabanikazi isabelomali Pop, futhi zilungele ukuthenga ngisho ukudla okuvela konjiniyela elaziwayo elincane.
Wonke umuntu ophethe ingubo phezu kwakhe
Esinye isizathu sokuba ukushoda ka amashaja engenantambo emakethe izindinganiso engahambelani. Namuhla kukhona eyisisekelo ejwayelekile b / n icala ezintathu kuphela. Ukungezelela kilokho, bayabambisana ezimele nomunye, ngakho abakhiqizi idivayisi yeselula kumele ukhethe omunye wabo. Inkampani edume kunazo ejwayelekile ikhuthaza Wireless Amandla Consortium, ekubhekaneni Qi ubuchwepheshe. Nale inkampani abambisane abakhiqizi ezingaphezu kuka-200 futhi wireless ukushaja WPC has cishe onobuhle 400. Indawo yesibili ukuthandwa ungaMandla inkampani Matters Alliance Powermat ubuchwepheshe yayo. mata wakhe wayeqamba emoyeni cafe McDonald kanye Starbucks. Neyesithathu kuyinto Alliance nomkhiqizi ukuze Wireless Amandla eyasungulwa inkampani abadumile Qualcomm.
Isizathu sokuba ukungavumelani amazinga
Umsebenzi eziyisisekelo okungenazintambo yazo zonke amazinga akhona njengamanje kanye azihlukile - kusekelwe ukudluliselwa kukagesi ngokusebenzisa amandla kazibuthe, okuyinto adalwe ohlobo ezimbili zethusi, enye yazo ifakwe ifoni, kanti eyesibili - mat ukushaja. Kugcine exhunywe kwi ishaja, okuyinto lusekelwa ngamandla inethiwekhi. Pad edonsa amandla kazibuthe kanye lale idivayisi yeselula ubona-ke, ukuguqulela emuva ugesi. Leli cebo jikelele ukusebenza kumadivayisi kanye pads ukukhokhiswa zukulwane. Nokho, izindinganiso zamanje bayakwazi ukubona igajethi elidinga okungenazintambo. Abakhiqizi ukuchaza kule ndawo, bathi "smart" ukushaja mat sokuchitha amandla ukukhiqiza kazibuthe kuyoba.
engaba Small - a lokususa omkhulu
Esinye isizathu sokuba ukusabalala elincane lo mshini ububanzi elinganiselwe kakhulu isenzo ukushaja amacansi. E. Igajethi ingagcina amandla, nje amanga ngqo ku mat. Empeleni, lokhu okungenazintambo namanje olunezintambo, ne umehluko kuphela nokuba ukuthi i-plug ayidingekile ukuze ufake izisekelo. On kungenzeka ukushaja bekude ukusebenza okwamanje Alliance for Wireless Amandla, COTA futhi inkampani liye landa uhla kuze kube ngamamitha ambalwa bese kwethulwa amadivayisi ehlelelwe 2015.
Seziqa "Samsung". Izibuyekezo umthengi
Ukulungiswa - izici eyisisekelo amadivayisi optical
TV BBK: ukubuyekezwa. izici Model, izici
KaPetru Square (Voronezh): umlando, ikheli, izithombe
Ama-Aries ne-Capricorn: ukuhambisana kwezibonakaliso
Basics of abaphathi inethiwekhi. Uyini-IP-ikheli
Amakhodi GTA ku imishini Russian kanye nokusetshenziswa yabo
-accessory amahle efudumele - isigqoko nge plaits. Ukwaluka izinaliti ukufunda obumbene umnqwazo